Ha u hesho lama filaan ah haddii qof, aad saaxiib ama xataa naftaada si qalad ah la tirtiro app ah ka iPhone, sababtoo ah waa u fududahay in ay tirtirto app ka iPhone ah. Nasiib wanaag, in markay dhacaan, ha ka welwelin. Waxaad raaci kartaa mid ka mid ah ka dib markii 2 siyaabaha aad ku undelete barnaamijyadooda ku iPhone.
Xalka 1: Undelete barnaamijyadooda ku iPhone dhex List iibsaday
Xalka 2: Undelete barnaamijyadooda ku iPhone dhex Search ee App Store
Apple ayaa hadda horumariyo app maamulka ay sidan oo kale ah in aad hadda si fudud dib kartaa app mar haddii app la tirtiray ay sabab u tahay sababta qaar ka mid ah. Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in aad soo celin app content haddii aad qabtid oo dhan jeer Mudanayaasha iCloud iyo gurmad aad iPhone si joogto ah.
Waagii hore markii iCloud aan waa mid caadi ah, haddii aad shil tirtiray app aad u leeyihiin in ay sidoo kale waxaa undelete dhex Lugood ama mar kale ka iibsan app. Haddaba waxyaalahan waa kuwo kala duwan oo aad si fudud u undelete karaan barnaamijyadooda aad tirtiray oo dhan waxa aad u baahan tahay in la sameeyo furan App Store ka iPhone iyo raadin magaca app oo ku soo celiyo.
Tallaabada 1 Tubada App Store
Ka iPhone App Store Tubada
Tallaabada 2 'Updates' ah Tab ka jaftaa
Hadda ka jaftaa 'Updates' ah Tab ka bar menu hoose ee
Tallaabada 3 Dooro "iibsaday"
Talaabada 4 Tubada on 'on Aan Tani iPhone' menu
Hadda, waxaad dooran kartaa in ay doortaan All ama ma ku iPhone this. Haddii aad doorato "All" waxaad ka heli doontaa liiska dhammaan app laga heli karaa oo ay ku jiraan kuwa kuwaas oo mar hore lagu rakibay in qalab aad iyo haddii aadan xulan on iPhone tan, waxaad arki doontaa oo kaliya kuwa app kuwaas oo aan ku rakiban in aad iPhone.
Hadda Tubada on 'Ma on iPhone Tani' menu on top
Talaabada 5 Dooro app
Dooro app in aad tirtiray oo doonaya in ay soo celiyaan. Kadib markii aad la doonayo app Tubada icon daruurtuna way bilaabi doonaa howsha.
Xusuusnow: Maskaxda ku hay reinstallation ee app waa lacag kharash haddii aad hore u soo iibsan app in. Waxaad dib karo marar badan app iibsaday.
Dib-u-rakibidda app via Search dhow yahay la mid ah sida habka liiska iibsaday
Habkan waxaad u leeyihiin in ay kaliya ku qor magaca App oo aad jeceshahay in aad mar kale soo dajiyo ee Search Box of dukaanka App oo aad ka heli doona natiijo u dhiganta.
Kadib markii app, tab icon daruurtuna way soo degsado doonaa geeddi-socodka iyo soo celinta app ee iPhone in muddo ah. Waxaa laga yaabaa in aad leedahay si ay u bixiyaan faahfaahinta Account Apple hanaanka Login.
Oo weliba inta badan Apps jecel yahay ciyaaraha iyo Games Xarumaha maamulo xogta ay sida Dhibcaha in iCloud kaas oo sidoo kale soo celiyo inta ay socoto reinstallation - haddii haddii aan si gaar ah loo saaro xogta halka tirka app.
> Resource > iPhone > 2 Siyaabaha Undelete Apps on iPhone